Posted by ကို Tranquillus | အောက်တိုဘာ 6, 2018 | ရုံး
လူမှုရေးကွန်ရက်များအများအပြားအားသာချက်များရှိသည်, ဒါပေမယ့် အဆိုပါသမ္မာသတိ နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဝကိုလေးစားမှုအမှန်တကယ်စိတျအပိုငျးမဟုတျပါပေမယ့်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတူတူဟောင်းတစ်ဦးကမှားသတင်းစကား၏ရှုံ့ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသူတွေကို၏စကားကိုနားထောငျဖို့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအန္တရာယ်ဖြစ်ပေမယ့်လည်းပညာရှင်ပီသစွာနဲ့လျင်မြန်စွာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တွစ်တာနဲ့တူတစ်ဦးက site ကို ပို. ပင်ကြောက်မက်ဖွယ်င်း၏ရုတ်တရက်လျင်မြန်စွာအင်တာနက်အသုံးပြုသူအကြားအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာထို့ကြောင့်မိမိအတွိ clean up လုပ်ဖို့လိုတဲ့သဘောထားကိုဖြစ်ပေမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်ရုတ်တရက်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်နည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ် ...
သငျသညျအခြို့သော tweets ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်သင့်စာပေအားလုံးခြေရာတွေကိုဖျက်ပစ်ချင်တဲ့အခါ, အချို့ကိုသင်စိတ်ဓာတ်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးတကယ်အသုံးဝင်မယ့်လျှင်မေးကြည့်ပါ။ လူမှုကွန်ယက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာရှိသည်နှင့်ဤတစ် jiffy အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်ပြောင်းလဲစေနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်, ဒါကြောင့်စဉ်းစားရန်ရှိသည်။
လူတိုင်းသေချာပေါက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာအချိန်အများစုကိုသတိထားဖြစ်ချေ။ သငျသညျ image ကိုအရေးကြီးပါတယ်ရှိရာတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ဥပမာတစ်ခုအဘို့အအန္တရာယ်ချင်ပေလိမ့်မည်ဘယ်သူကိုမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်အမြင့်ဆုံးမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း သင်၏လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အသီးအသီးအကောင့်တစ်ဦးအပေးအယူဒြပ်စင်ကိုရှာဖွေကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ malicious လူတွေမျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များစေမည်သို့မဟုတ်သင်ဖွင့်ထားအတွက်အရာရာထုတ်ဖေါ်ဖို့ဝဘ် (က်ဘ်ဆိုက်, ဘလော့ဂ်ကို ... ) အပေါ်တိုက်ရိုက်ကိုးကားပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းယင်း၏ရလာဒ်များ၌သင်တို့၏ incriminating မြေားကိုကိုးကားနိုင်သည့်ဥပမာများအတွက် Google ကဲ့သို့သော search engine ကိုသစ္စာဖောက်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျ SEO ဆိုသည်မှာနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ tweets ကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ရုံက Google ကိုသွားနှင့်သင့်အကောင့်အမည်နှင့် keyword ကို "twitter" တွင်စာရိုက်ခြင်းဖြင့် tweets ရှာပါ။
ရှာဖွေစုဆောင်းပင်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းရှိသည်ကြောင့်, မိမိတိုင်းပြောင်းရွှေ့များအတွက်အများပိုင်ကိန်းဂဏန်းစောင့်ခံခြင်းမရှိဘဲ, ကမနှစ်မြို့ဖွယ်တစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်သင့်မန်နေဂျာတဦး tweets ဆိုးစှဲထွက်ခွာတွေ့ရှိခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကံမကောင်းဤသည်အလွန်လျင်မြန်စွာဖွစျနိုငျ ပို. ပို. တဲ့အနေအထားသို့မဟုတ်တာဝန်ကျတဲ့အတှကျသက်ဆိုင်သူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးအယူအဆအရလူမှုရေးကွန်ရက်များသို့သွားရောက်လေ့ရှိတယ်။
ဒါဟာလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုရှိခြင်းပွဿနာမြားစှာမှသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေး, ဒါကြောင့် Twitter ပေါ်တွင်အဟောင်းအကြောင်းအရာအံ့သြဖွယ်များထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အသုံးဝင်သည်ကိုရှင်းလင်းကြောင်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါမူကား, ဘယ်လို?
မိမိအဟောင်းများကို tweets တစ်ရှုပ်ထွေးကိစ္စရှင်းလင်း
တွစ်တာဟောင်း tweets ၏ဖယ်ရှားရေးလွယ်ကူချောမွေ့ပါဘူးတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ကျွန်တော်တစ်ဦးဦးစိတ်ကူးထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ အမှန်မှာထို2000 မကြာသေးမီ tweets ကျော်လွန်ပြီး, သင်သည်သင်၏အချိန်ဇယား၏ကျန်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်မည်, နှင့်ပုံမှန် update အဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရပ်ဒီနံပါတ်ကိုအလွယ်တကူဤပလက်ဖောင်းတွင်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအောင်မြင်စွာအသက်အကြီးဆုံး tweets ဖယ်ရှားပစ်ရန်? သငျသညျကို manually ပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ရှုပ်ထွေးနည်းစနစ်မှတဆင့်ဤအတွိဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အရာတစ်ခုမှာသင်ကထိရောက်သောထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သည်းခံခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော tools တွေလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, အချို့ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော tweets ဖျက်ပစ်ပါသို့မဟုတ်အဓိကသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေး
သငျသညျမလိုအပ်သောကိုင်တွယ်ရှောင်ရှားရန်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမတိုင်မီသင်တချို့ tweets သို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖျက်ပစ်ရန်လိုလျှင်လုပ်ဖို့အတူတူထိန်းသိမ်းရေးရှိသည်, ဒါကြောင့်မစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
ဖတ်ရန် Excel ကိုသင့်ရဲ့ Productivity သိကောင်းစရာများအပိုင်း-တိုးမြှင်
သငျသညျအထူးကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုသည့် tweets သင်သိသည်မှန်လျှင်, သင့်ရဲ့ tweets ဖျက်ခံရဖို့ကိုရှာဖွေတဲ့ကိရိယာ (ကွန်ပျူတာ, စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်) ကနေအဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုသုံးပါ။ သင်သည်သင်၏ဟောင်း tweets စုစုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုလျှင်သို့သော်, သင်သည်သင်၏ tweets ခွဲခြားခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆိုက်ရန်သင့်မော်ကွန်းတိုက်ကိုမေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကိုရဖို့, သင်ရုံသင့်အကောင့်ဆက်တင်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့နှင့်လျှောက်ထားရန်ရှိသည်ကအသုံးမအဘယ်ကြောင့်ယင်းဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်အောင်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်သနည်း
အဲဒီမှာသင်အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာအဟောင်း tweets ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုတဲ့ကိရိယာတွေအတော်များများရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်စာအုပ်ဆိုင်လိမ့်မည်ဟုထိရောက်သောသန့်ရှင်းရေးအဘို့ထိုသူတို့ရရှိရန်အကြံပြုလိုတယ်။
အလွန်ပြည့်စုံသောကွောငျ့ဒီ tool Tweet Delete အတော်လေးရေပန်းစားသည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြအဖြစ်အမှန်စင်စစ်, က tweets ဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာဥပမာတစ်နှစ်ဖယ်ရှားခံရဖို့အကြောင်းအရာရွေးချယ်ဖို့ Option တစ်ခုနှင့်အတူတစ်ချိန်ကမှာအများအပြား tweets ကိုဖယ်ရှားကူညီပေးပါမည်။ ဤသူသည်သင်တို့ဥပမာ tweets သင့်ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့အိမ်ထောင်စုလုပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီ tool ကိုအဲဒီမှာကိုရပ်တန့်မထားဘူး! သငျသညျသော့ချက်စာလုံးများနှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာသန့်ရှင်းရေးဘို့မိမိတို့အမျိုးအစားပေါ်အခြေခံပြီး tweets ရွေးနိုင်သည်။ သငျသညျခြစ်ရာကနေစတင်ချင်လျှင်, ဤ tool ကိုလည်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင့်လှုပ်ရှားမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေးခွင့်ပြုပါတယ်။
tweet Delete တစ်ဦးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအကောင့်အတွက်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ခံစားရန် $6ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ကတည်းကသို့ရာတွင်ထိုသို့အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်စျေးနှုန်းအဘို့, ခဏရဲ့မဆိုင်းမတွပေးစွမ်းဆောင်ရည်ပေးထားမရှိ။
ဖတ်ရန် PowerPoint လှုပ်ရှားမှုကာတွန်းသင်ခန်းစာ
လက်ရှိတွင်သင်ကသင့်ရဲ့ tweets delete နိုင်သော application တစ်ခုအဘို့အဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့အချက်မှာမှန်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်တို့ကိုအခမဲ့ပေးသော၏အသုံးပြုမှုကိုဖျက်ပစ်ရန် Tweet များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ tool ကအသုံးပြုသူ tweets ဖျက်ပစ်ရန်လိုလားရာမှနေ့စွဲကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ tweet ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကြွင်းသောအရာပါပဲ။ သို့သော်ဤ action ဒီတော့သင်တို့ရှေ့မှသင်၏ရွေးချယ်မှု၏သေချာဖြစ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခြို့သောဖျက်ခြင်းနောင်တဝံ့လျှင်, မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကွပ်မျက်မတိုင်မီသင်၏ဖိုင်များကိုပြန်လည် backup တစ်ခုလုပ်ပါ။
သူ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းကိုရှင်းလင်းနှင့်သူ၏ Image ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေဘယ်လိုနေသလဲ? သြဂုတ်လ 25th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောMaxicours: စျေးပေါအွန်လိုင်း tutoring ၏ရည်ညွှန်း